Wararkii Ugu Dambeeyay Ololaha Doorashada oo sii xoogeestay iyo Lacgao badan oo la qeybiyay - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa socda ololihii ugu dambeeyay ay wadaan Musharaxiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana saacado kooban ka harsan tahay xiliga ay bilaan laheyd doorashada maanta lagu kala baxayo.
Musharaxiinta Madaxweyne gaar ahaan kuwa loo saadaalinayo in ay kusoo bixi karaan kursiga loo tartamayo ayaa xalay ilaa saaka wada ololihii ugu dambeeyay ay ku kasbanayaan codka Xildhibaanada labada Aqal.
Ololaha ugu xoogan ayaa ka socda Hoteelo kuyaala magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ololaha musharaxiinta qaar , waxaa sidoo kale olalaha ka socdaan guryo ay degan yihiin qaar kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne.
Musharaxiinta ololaha ugu xoogan wada ayaa waxaa kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif, Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid., afartan Musharax ayaana la saadalinayaa in ay noqon karaan kuwa hela codadka ugu badan ee doorashada wareega hore.
Xildhibaanada Labada Aqal oon xalay seexan ayaa dhankooda marba musharax la kulmaya, waxa ayna u balan qaadayaan in codkooda ku taageerayaan, Xildhibaanada ayaana Musharaxiinta codkooda uga badalanaya Dhaqaale iyo balan qaadyo siyaasadeed.
Musharaxiinta qaar ayaa bilaabay xalay ilaa saakay in ay bixiyaan lacago ay ku kasbanayaan codka Xildhibaanada, waxaana lacagaha la bixinayo ay yihiin kuwa aan cadadooda rasmiga ah laheyn Musharaxba uu qeyb bixinayo.
Lacagaha ay bixinayana Musharaxiinta Madaxweyne qaarkood ayaan wali gaarin 100-kun oo dollar, Mushraxiinta qaar ayaana la sheegay in Xildhibaanada siiyeen lacago ku dhaw 50-Kun oo Dollar si ay codka Xildhibaanka ugu bedeshaan.
Musharaxiinta qaarkood ayaa sidoo kale la sheegay in ay bixinayaan lacago badan iyo gadiidka aysan xabaduhu karin, waxaa sidoo kale Musharaxiinta sameenayaan balan qaadyo kala duwan oo Xildhibaanada lagu soo jiidanayo.
Doorashada goordhaw ka dhaceysa magaalada Muqdisho ayaa ah mid aad u adag, Musharaxiinta qaarkood ayaana sameestay isbaheysiyo ay ku doonayaan in ay kula dagaalamaan Musharax Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh ayaa ah ila ahada Musharaxa ugu horeeya kuwa tartamaya, waxa uuna heestaa taageerada in ka badan 100-Xildhibaan uu isku hubo, waxaana la rajeenayaa in wareega hore ee Doorashada uu hogaanka u qabto .
Musharaxiinta kale ayaa hadii uu guuleesto isbaheysiga ay sameesteen ayna taageeraan Musharaxa ugu codka badan waxaa suurto gal ah in laga guuleesto Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kusoo tala galay guul iyo guul daro.
Waxii kusoo kordha doorashadan kala soco Wararkayaga dambe Insha Allah